गोकर्ण विष्टसहित यी ८ मन्त्री हटाईंदै ! नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ आजै - National News
गोकर्ण विष्टसहित यी ८ मन्त्री हटाईंदै ! नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ आजै
November 20, 2019 admin192
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज मन्त्रीण्डल पुनर्गठनको तयारी पुरा गरेका छन् । वालुवाटारमा आज हटाइन लागेका मन्त्रीको सूची तयार भइसकेको छ । नयाँ थपिने मन्त्रीहरुका बारेमा पनि टुंगो लागिसकेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद हेरफेरको प्रस्ताव राख्ने भएका छन् । दिउसो मध्यान्ह देखि सचिवालयको बैठक सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे सहमति भइसकेको छ । यस अघि प्रधानमन्त्रीले अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसंग पनि छलफल गरिसकेका छन् । सोही सहमतिलाई सचिवालयका तर्फबाट औपचारिकता दिन लागिएको हो । स्रोतका अनुसार हटाइने मन्त्रीहरुको सूचीसमेत तयार भइसकेको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विक हटाइने मन्त्रीको सूचीमा परेका छन् । यस्तै कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा पनि हटाइने सूचीमा परेका छन् । हटाइएका स्थानमा नयाँ मन्त्री पनि आजै नियुक्त गर्ने तयारी छ । नयाँ मन्त्रीहरुमा भिम रावल लगायतको नाम चर्चामा आए पनि नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अभिभावकको टाउको दुखाई : छोराछोरीमा मोबाइलको लत
के तपाईं सन्तुलित जीवन बाँचिरहनुभएको छ ?
नेपाली सेना चीन र भारतले मिचेका सिमामा जाँदै
November 15, 2019 admin192
Amazon CEO Jeff Bezos commits $10 billion to fight against climate change
March 5, 2020 March 5, 2020 Lishyarini Sivarajah
खुकुरी प्रहारबाट विद्यालयकी प्रअ गम्भिर घा इते
November 13, 2019 admin192
Prank Played On An Old Man Who Sells Tofu Dessert For A Living Sparks Outrage
This Young Man Paid For An Elderly’s Groceries Even After The Old Man Cuts The Line In Front Of Him
Street Dog Stretched Its Head And Hands Outside Its Cage To Gain Love And Attention From Visitors